HomeInvestment & FinanceVirus Takes Toll on Myanmar Economy
A family wearing protective masks purchases food atamarket in Yangon, Myanmar, February 3, 2020. REUTERS/Ann Wang
“We have raw materials only until the end of April. After April, it’s another story. Unless global authorities get the outbreak under control soon and trade returns normal, there will be problems. It will haveaserious impact on the garment sector as well as on SMEs, tourism and agriculture,” said DawKhaingKhaingNwe, joint secretary of the Myanmar Garment Manufacturers Association.
Chinese investments account for 25.15 percent of total investment into Myanmar, making China the second–largest foreign investor after Singapore. It is also Myanmar’smost important trade partner, accounting for $11 billion in bilateral trade. Myanmar exports over $5 billion worth of goods to China annually and the Chinese are major buyers of Myanmar’s agricultural products. Chinese traders have halted activities, resulting in pressure for Myanmar exporters. Reduced access to Chinese raw materials has also hurt factories, including those in the garment sector, who are facing severe shortages that can lead to factory closings or layoffs. The garment industry currently employs around five million women.
As impacts of the virus outbreak continue to mount, Myanmar is reconsidering visa on arrival.It has started requiring that visitors entering the country showahealth certificate.
မြန်န်မာ့စီးပွားရေးအရှိက်ကို တည့်တည့်ထိစေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်
လူစုလူဝေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုလည်း ဖျက်လိုက်တာ ၊ ရက်ရွှေ့တာမျိုးတွေကို လုပ်လာပါတယ်။ နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ၊ တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွေကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာတော့ လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပတဲ့ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေအပါအဝင် ပွဲလမ်းသဘင်တွေကို ဧပြီ ၃၀ ရက်အထိ မပြုလုပ်ကြဖို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအရ သက်ရောက်မှုက ကြီးမားနေပါတယ်။ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြီးမားတဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလမှာဆို မြန်မာနယ်စပ်မှာ တရုတ်ကို ကိုပို့မယ် ကုန်စည်တွေ ပိတ်မိတာတွေရှိပါတယ်။ ဖရဲ ၊ သခွားနဲ့ သီးနှံတင်ပို့မှုတွေကို ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာနှစ်အစကထက်စရင် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ တရုတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ နယ်စပ်စခန်း လေးခုမှာ နှစ်ခုက အရင်နှစ်ကာလတူထက်ကိုနည်းနေပါတယ် ။ အစိုးရနဲ့လာဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအရေအတွက် လျော့နည်းလာသလို ရန်ကုန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကိုလည်း ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတင်းကြောင့် တရုတ်ကုန်ကြမ်းကို မှီခိုနေရတဲ့ ထုတ်ကုန်အပိုင်းအတွက်ထိခိုက်နေပြီးတော့ ကြာလာရင်ပြတ်လပ်လာနိုင်တဲ့ ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရအနေနဲ့ အဖြေကြိုရှာသင့်ပါပြီ။
“ လတ်တလောအခြေနေအရတော့ ကုန်ကြမ်းရရှိမူတွေက ဧပြီလကုန်အထိ တော့ရှိနေပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့အခြေနေရှိဖြစ်နေပြီ။ဒီရောဂါကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မူက ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲမူမရှိဘူးဆိုရင် ဒီဂယက်က မေ ၊ ဇွန် ၊ ဇူလိုင်အထိ ကိုရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကာလတွေအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Covid 19က ပြည်တွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေသာမက SME လုပ်ငန်းများရော ခရီးသွားလုပ်ငန်းရော သစ်သီးဝလံလုပ်ငန်းများရော အားလုံးကို ထိခိုက်မူရှိပါတယ် ” လို့ မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ Covid 19 နဲ့ပါတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနဲ့ နောက်စပ်တွဲကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြုလုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ UMFCCI ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ဆိုပါတယ်။
“ ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကုန်ကြမ်းတွေကို တရုတ်ပြည်ကနေ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းက နေပြီး တင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဟိုဘက်က အခြေနေကြောင့် ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမူလျော့နည်းခဲ့တဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ဒီရောဂါသည် တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေအပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမူတွေရှိခဲ့ပါတယ်”လို့ စီပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ဆိုပါတယ်။
Previous articleThe Prado Museum’s Unsung Workers Step into the Limelight
Next articleIs Virgil Abloh the Karl Lagerfeld for Millennials?